महानगरीय - मसीही मण्डली मा एक उच्च रैंक नियुक्त गरिएको छ। कागजातहरूको म लिपिबद्ध शीर्षक पहिलो आधिकारिक उल्लेख दुनियावी परिषद, 325 मा Nicaea मा आयोजित। यो पनि वर्गीकरणका आफ्नो स्थान आदेश भएको थियो।
रोमी साम्राज्यको मा, प्रान्त को मुख्य शहर महानगरीय भनिन्छ। को बिशप, विभाग भइरहेको, कि archdiocese मा आफ्नो निवास महानगरीय भनिन्छ।
महानगरीय - बिशप को उच्चतम शीर्षक छ। एक बिशप (supervising, nadsmatrivayuschy) बारी मा Deacon र प्राचीन (उर्फ पुजारी, उर्फ Fr) पछि एक उच्च डिग्री तेस्रो पुजारीको छ। तसर्थ, बिशप अक्सर बिशप भनिन्छ। "आर्क" - ग्रीक भाषा आए र उच्च Ecclesiastical रैंक संकेत गर्दछ टुक्रा। को dioceses को Bishops शासित र महानगरीय पालन गर्छन्। को Diocese ठूलो, को Bishops वा Bishops, यो व्यवस्थापन गर्न थियो भने, Archbishops भनिन्थ्यो। रूसी अर्थोडक्स चर्च बस महानगरीय पछि हुन यो प्रतिष्ठित शीर्षक।
यी उच्च Ecclesiastical बाँध्न हेर्न विभिन्न टोपी - हुड। बहुमूल्य धातु र पत्थर बनेको पार संग काला र Metropolitans नै क्रस संग सेतो डाकू लगाउने - बिशप काले, archbishops लगाउने। तिनीहरूले फरक र मेन्टल। कुलपिता हरियो को मेन्टल पहनता छ, नीलो - त्यसैले, Bishops र archbishops बैजनी वा गाढा रातो, महानगरीय छन्। मा कालो राज बस्त्र सबै episcopate Lent। महानगरीय - यो मानार्थ शीर्षक। यस्तो शीर्षक को जिम्मेवारी आफ्नो सेवाहरू लागि दिने, इनाम, Insignia एक प्रकारको छ। यो रूसी अर्थोडक्स चर्च Sanov archbishops र metropolitans चर्च अघि व्यक्तिगत merits लागि Bishops सम्मान गर्दै हुनुहुन्छ। तिनीहरूले प्रदान र दीर्घायु लागि हो।
एक भन्दा पुरातन को
मसीही मण्डली मा पुरानो शीर्षक छ - यो महानगरीय कि उल्लेख गर्नुपर्छ। मण्डली केही शोधकर्ताओं metropolitans प्रेरितहरूलाई थिए भन्ने विश्वास गर्छन् अरूलाई त्यहाँ चर्च अख्तियारको centralization एक आवश्यकता थियो जब द्वितीय शताब्दीमा यो निर्णयाधिकार, को उद्भव समावेश गर्नुहोस्। र वर्ष मा 325 र 341 को सान को बिशप को परिषद मा बस पूर्ण स्थापना गरिएको थियो। शक्ति एकदम मात्रा बढेको जो, दर्ता गरिएको छ। सबै वैध र नियमन थियो, यो कुनै पनि विवाद उत्पन्न भन्दा बढी हुनु हुँदैन। 589 मा आयोजित Toledo को गिरजाघर, महानगरीय व्यवस्था पनि अधिक विस्तार - अब उहाँले अधीनस्थ Bishops दण्ड सकेन। आठ शताब्दीपछि - सामान्य मा, मसीही सिद्धान्त को Councils चतुर्थ मा गठन भएको थियो। निम्न वर्ष कुनै पनि महत्वपूर्ण परिवर्तनहरू ल्याउन थिएन।
, राजकुमार व्लादिमीर महान् गर्दा एक्स शताब्दीको अन्त मा रस बप्तिस्मा लिए। प्रायजसो, यो वर्ष 988, तर केही इतिहासकारहरूले मा कल र 991. साथै, त्यहाँ कीव को पहिलो महानगरीय कुनै सही डाटा छ भनी उल्लेख। तर xvi शताब्दीमा देखि, यो माइकल थियो कल्पित छ। उहाँले पनि उहाँले एक जातीय वा ग्रीक, वा सिरियाली थियो, सिरियाली नाम थियो।
यो महानगरीय माइकल र जो उसलाई आइपुगे भिक्षुहरूले, सुन-domed माइकल गरेको र कीव Mezhegorsky monasteries निर्माण थिए विश्वास छ। 992-1008 वर्ष - च्याम्पियनशिप प्रतियोगिताहरूमा महानगरीय Leonty, केही स्रोतहरु यसलाई आफ्नो नै मिति पहिलो महानगरीय बोर्ड थियो भन्छन्। त्यसपछि Theophylact, यूहन्ना म, Feopemt, को युनानी को Kirill म आए। contested तिनीहरूलाई प्रत्येक को बोर्ड को मिति। यो ती सबै विदेशीहरू थिए उल्लेख गर्नुपर्छ।
र 1051 मा यो रैंक स्वीकार र 1054 सम्म चर्च शासन द्वारा मात्र, महानगरीय Hilarion (Rusin) एक compatriot थियो। उहाँले 1088 को बारे मृत्यु भयो। चर्च उहाँले समयमा नेतृत्व Yaroslava Mudrogo। एक सेन्ट रूपमा महिमा - को अर्थोडक्स चर्च मा एपिस्कोपल रैंक को पवित्र छ। उहाँले पुस्तकको लेखक छ "कानून र ग्रेस मा शब्द," उहाँले 1030-1050 मा, क्रमशः लेखे। साथै, उहाँले यस्तो लेखे, "प्रार्थना", "विश्वासको Confession"।
महानगरीय Hilarion पनि Yaroslav बुद्धिमान् प्रशंसा लेखे। Hilarion जीवन बारेमा धेरै सानो विवरण, तर "Bygone साल को कथा" मा कीव-Pechersk Lavra निर्माण Hilarion को शासनकालमा छ, 1051 मा सुरु संकेत गर्दछ। को नोभगोरोड द्वितीय क्रनिकल मा 1054 मा कीव को महानगरीय एप्रैम भयो भनी उल्लेख। यो तुरुन्तै Yaroslav Mudrogo Illarion द्वारा 1054 मा उनको मृत्यु पछि हटाइएको थियो कि सुझाव।
को सेन्ट र चमत्कार कामदार
रूसी अर्थोडक्स चर्च को इतिहास मा धेरै महत्वपूर्ण आंकडा महानगरीय Alexy थियो। एलेक्सिस म (Sergey Vladimirovich Simansky, कुलपिता 1945 देखि 1970), र Alexy द्वितीय (Aleksey Mihaylovich Ridiger, कुलपिता 1990 देखि 2008 सम्म) - त्यो दुई प्रसिद्ध मास्को र सबै रूस, को Patriarchs को संरक्षक सेन्ट छ।
एक boyar परिवार देखि आ, छोरा Fodora Byakonta, यस्तो Pleshcheev र Ignatiev रूपमा धेरै महान परिवार को संस्थापक। सबै रूस चमत्कार कामदार र सेन्ट मास्को (canonized 50 वर्ष उहाँको मृत्यु), आफ्नो जीवनकालमा महानगरीय Alexy एक statesman र सूक्ष्म कूटनीतिज्ञ रूपमा धेरै सफलता हासिल। उहाँलाई लिथुआनिया को Duchy र उहाँले सम्पर्क थियो जसलाई संग गिरोह, र अर्को तरिका विचार संग - एलेक्सिस Hanshi Taydulu आँखा रोग बाट निको पार्नुभयो। 1354 Constantinople, कीव को महानगरीय र सबै रस Elevferiy Fodorovich Byakont (संसारमा) को कुलपिता को स्थिति नियुक्त देखि 1378 मा आफ्नो मृत्यु सम्म यो क्षेत्रमा थियो। उहाँले सहित धेरै monasteries स्थापित Chudov विहारको को Kremlin मा। को Kremlin नै जब यो ढुङ्गा मा निर्माण गर्न थाले। गुम्बामा बाहेक, उहाँले Spaso-Andronicus, Simonov, Vvedensky एपिस्कोपल र Serpukhov monasteries स्थापित। उहाँले धेरै धार्मिक काम लेखे। 1947 मा चमत्कार कामदार को पवित्र अवशेषहरूको पनि Bloch इपिफ्यानी Name जहाँ तिनीहरूले यो दिन झूठ मास्को मा गिरजाघर, हस्तान्तरण गरेका थिए।
रूस र XIV शताब्दीमा गर्न बप्तिस्मा को क्षण देखि, देश एक महानगरीय, Constantinople मा नियुक्त गरिएको छ टाउको जो थियो। निस्सन्देह, अक्सर metropolitans पठाइएको रूसी थिएनन्। पहिले किनभने अगुवाहरू, यो पोस्ट compatriots मा हेर्न चाहनुहुन्छ 1589 रूस मा patriarchate भयो metropolitans चर्च वर्गीकरणका को टाउको मा उभिए, र तिनीहरूलाई धेरै निर्भर। कीव चर्च को पहिलो रूसी टाउको (शासन 1147-1156 को समयमा, Smolyatich) Clement थियो। त्यसपछि कार्यालयमा पनि युनानी र Bulgarians थिए। तर यसको टाउको मा पूर्ण autocephaly राष्ट्रिय चर्च को अवधि थाले जसमा Theodosius (1461-1464), को शासन देखि समय देखि रूपमा चिनिन थाले जसले ज्यादातर रूसी Metropolitans थिए "मास्को र सबै रूस।"
एक प्रमुख चर्च नेता र लेखक एक महत्वपूर्ण साहित्यिक पैतृक छोडेर जो, Theodosius (Byvaltsev) पहिलो मास्को महानगरीय रूसी राजकुमार नियुक्त र Constantinople को छैन कुलपिता भएकोमा प्रसिद्ध छ। Theodosius को शासन अझै पनि फिलिप म र Gerontius, Zosima र सिमोन लगाएका देखि patriarchate को अनुमोदन अघि, मास्को को महानगरीय - यो रूसी अर्थोडक्स चर्च उच्चतम चर्च रैंक छ। र बारी मा यो Barlaam र दानियल, यूसुफ र Macarius, Athanasius र फिलिप द्वितीय, Kirill, एंटनी र Dionysius सम्मानित गरिएको थियो। मास्को महानगरीय अय्यूब पहिले नै थियो र पहिलो कुलपिता।
सेन्ट तातियाना। पवित्र Martyr तातियाना
स्वर्गदूतले दिमित्री दिन। संरक्षक Dimitry Donskoy
नमूना रिजुम कुक: मस्यौदा नियम
Tushino मा रूप परिवर्तनको को मास्को चर्च
रोमन Kartsev। जीवनी र काम
तीन-wheeled वाहन: वर्णन, मोडेल
रस "Santal" - सबै भन्दा राम्रो को एक!
को मन्त्र पश्चात्ताप गर्न एक कल रूपमा Lent
मालिकको र विनिर्देशों को Thl 5000 को समीक्षा
कपालको महसुस भयो: मास्टर-क्लास